World News | Somalia News
Askari ka tirsan Ciidamada qalabka sida oo dilay dhowr qof oo ay ka mid ah tahay Hooyada dhashay.
BARNAAMIJYADA IYO WARARKA
Cali Guudlaawe oo loo doortay Madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle
Maxkamadda Ciidamada oo xukun ku riday Sarkaal ka tirsan Alshabaab iyo Darawalkiisii oo lagu qabtay dagaal
Maxkamadda Darajada koowaad ee Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun xabs daa’in ah ku riday laba xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab, kuwaas oo lagu qabtay dagaal ka dhacay xuduurka degmada Deyniile iyo degaanka Basra ee degmada Balcad, Gobolka Sh/Dhexe. Xasan Cabdi Aadan Nuur & Cumar Xuseen Abshir Jaabir ayaa lagu soo eedeeyay inay ka mid yihiin, iyagoo ahaa Sarkaal iyo Darawalkiisa oo ka howlgeli jiray degaanada u dhaxeeya degmada Balcad iyo degaanka Basro oo xarun Alshabaab ku leeyahay. Ad Weerarkii Ciidamada Xoogga Dalka ku qaadeen ayaa labada Eedeysane lagu soo qabtay iyagoo oo dhawaac ah Bishii November 2019. Waxaana markaas kadib xaaladooda la tacaalay oo daweeyay Hay’adaha Caafimaadka Dowladda, waxaana 11-kii March Sanadkan ay ku wareejiyeen Xafiiska Xeer Ilaalinta oo xilligaas codsaday in xabsiga dhexe loo taxaabo Xasan iyo Cumar. Xasan Cabdi Aadan Nuur ayaa ahaa madixii Maaliyadda degmada Balcad u qaabilsanaa Alshaaab; Cumar Xuseen oo darawal u ahaa ayaa Maxkamadda ka hor sheegay inuu ahaa nin iskiis isaga xamaasho laakiin Xafiiska Xeer Ilaalinta Ciidamada Qalabka Sida ayaa labada Shaqsi kuwada Eedeeyay in ay qayb ka ahaayeen weerar ay Alshabaab ku qaadeen fariisin Ciidan. Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute guddoomiyaha Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida ayaa ku dhawaaqay xukunka labada edeysane ee Xasan Cabdi Aadan Nuur iyo Cumar Xuseen Abshir Jaabir oo lagu xukumay Xabsi daa’in. Warar Xul ah
Raheem Sterling Oo Ku Dhaw In Uu Lionel Messi Ku Dhaafo Rikoodh La Yaab Leh Xilli Ciyaareedkan.
Xiddiga Raheem Sterling ayaa qaab ciyaareed cajiib ah la qaadanaya kooxdiisa Man City iyada oo uu Tababare Pep Guardiola si joohto ah ugu tiirsan yahay kulamada. Shabakada TalkSport ayaa shaaca ka qaaday xog muujinaysa in uu Tababare Pep Guardiola oo tababare u soo noqday xiddigaha ugu fiican adduunka sida Robert Lewandowski, Kevin De Bruyne iyo kabtanka Barcelona ee Lionel Messi oo ah xiddiga kulamada ugu badan ka hoos ciyaaray tababare Pep Guardiola isaga oo ciyaaray 219 kulan. Shabakada ayaa sheegtay in wakhtigii ay Guardiola iyo Messi wada joogeen Barcelona ku wada guulaysteen horyaalka La Liga 3 jeer, champions League 2 jeer muddo 4 sano ah. Shabakada ayaa sheegtay in uu xiddiga Raheem Sterling haatan Guardiola ka hoos ciyaaray 201 kulan sidaas darteed ku dhawyahay rikoodha Lionle Messi ee xiddigaha kulamada ugu badan ka hoos ciyaaray Pep Guardiola. Hadii uu Sterling ciyaaro 18 kulan xilli ciyaareedkan waxa uu bar-barayn doonaa rikoodha Messi waliba wuu dhaafi doonaa hadii uu dhaawacyada ka fogaado.
Jalalaqsi mayor Mohamed Nur escapes grenade attack on his home
Monday October 12, 2020 MOGADISHU (HOL) - Jalalqsi town mayor Mohamed Nur has escaped an attack on his residence after unknown assailants hurled granades. Ads By Google Police in the central Somalia town said the mayor was not in the house at the time of the incident adding there no casualties. Ads By Google According to the police, the attackers hurled several grenades into the house in what they said was aimed at harming the mayor. The mayor has not yet commented on the attack. The incident came amid a clash between security forces in the town and Al-Shabaab militants who stormed a police station. Police said they killed two militants and recovered AK-47 riffles. Security forces went on hot pursuit for the militants in the early houses of Monday, police said. Al-Shabaab has on several occassions mounted attacks on government installations but has also come under intense offensives from Somali and allied forces. advertisements Turkey digs deeper into Somalia infrastructure projects - Nation Africa Architect Omar Degan’s latest work is an ode to Somali culture - Wallpaper LeBron James and the Lakers are NBA champions: ‘We just want our respect’ - Toronto Star Israel to ‘immediately’ bring over 2,000 Ethiopian Jews - AP NPR blamed for 'incompetent' terror war - The Star Urgent need to scale up mental health services in Somalia - WHO
Dood Culus Oo Ka Taagan Sharcinimada In Shaqaalaha Dawladdu Ku Milmaan Xubnana Ka Noqdaan Xisbiga KULMIYE Iyo Guddoomiyaha Hay’adda Shaqaalaha Oo Ka Hadlay
Hargeysa, October 12, 2020- (Foore)- Guddoomiyaha Hay’adda Shaqaalaha Dawladda Somaliland Md. Farxaan Aadan Haybe ayaa si adag uga hadlay doodaha la xidhiidha sharcinimada ku aaddan in uu ku soo baxay liiska Xubnaha Golaha Dhexe ee xisbiga KULMIYE isaga oo ah guddoomiye gacanta ku haya masuuliyadda adeegayaasha umadda oo ah shaqaalaha dawladda oo sharcigu ka reebayo in ay ku milmaan xisbiyada qaranka. Guddoomiyaha Hay’adda Shaqaalaha Dawladda Somaliland Md. Farxaan Aadan Haybe waxa uu sheegay in aanu jirin sharci u diidaya in uu ka mid noqdo golaha dhexe ee xisbiga horena uu uga mid ahaa waxaanu isaga oo arrintaasi ka hadlaya yidhi: “Sharciyada ayaa wax hagta ee rayi qof waa aragtidiisa kaliya wax uu cabiray. Ma ihi shaqaale dawladeed (Civil Servant) waxaan ahay Gudoomiye Hayadeed, Sharciyad ii diidaysaana ma jirto ka mid noqoshada Golaha dhexe ee Kulmiye. Golihii horena ka mid ayaan ahaa, imikana waan ahay oo xubintii ayuunbaan ku soo noqday cirkana kamaan soo dhicin ee xukuumada xisbiga Kulmiye ayaan ka mid ahay sida wasiirada, Gudoomiyayaasha Hayadaha kale ee Dawlada waxaanse si dhab u ogay una aqoonsanay in masuuliyada iyo xeerarka aanu ku shaqayno ay na farayaan waajibaadkayaga shaqo sida ay u farayaan wasiirada, xildhibaanada, Mayorada iyo masuuliyiinta kale ee Hayadaha Dawlada ee ku abtirsada Xisbul Xaakimka, taasina ay noo cadahay” Waxa haddaba dood taasi ka duwan Iyana Guddoomiyaha ugu jawaabay Garqaano dhawr ah iyo dad shacab ah oo badankoodu ku doodaya in isaga iyo masuuliyiinta xilalka la midka ahba hayaa aanay sharci u lahayn ay kaga mid noqdaan maadaana ay yihiin adeegayaal Bulshada la rabo in ay dhex u noqdaan. Garyaqaan Muuse Yuusuf oo loo yaqaano Muuse oo daba socday hadalka Guddoomiyaha ayaa yidhi sidan: “Horta U jeedada looga reebay masuuliyiinta aan ahayn xilka wasiir/wasiirxigeen/wasiirdawle, waxa weeye laba qodob. In aanay Agaasimeyaasha guud ka mashquulin shaqadooda iyo in aanay meesha ka bixin masuuliyada dhexdeednimadu. Al muhiim booskani waxa uu u dhigmaa ama yahay Agaasin. Sidaas oo ay tahay waa in loo dabaqaa Agaasimeyaasha guud. Ma jiro xeer u fasaxay in uu ka mid ahaado xisbi” Garyaqaan Muuse Yuusuf (Muuse Case). Dhinaca kale garyaqaan Mubaarik Cabdi Ismaaciil oo ka mid ah sharci yaqaannada da’da yar ee reer Somaliland oo isna ka hadlayay doodda Guddoomiyaha hay’adda shaqaaluhu waxa uu yidhi: “Farxanoow shaqaale dawladeed baad tahay ha,yaddaaduna waxay ka mid tahay ha’yadaha ka madaxa banaan xukuumada under the constitution ,xeerka kala xadaynta xukuumada iyo ha,yadaha madaxa banaan ee dawladuna wuu kuu diidaya inaad siyaasada ku milanto” ayuu yidhi Garyaqaan Mubaarik Cabdi Ismaaciil Let’s block ads! (Why?)
Horjooge ka tirsan Al-Shabaab iyo darawalkiisa oo maanta la xukumay
Hargeysa, October 12, 2020- (Foore)- Hoggaamiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee WADDANI Mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa waxa uu habeen hore ka jeediyay kulan ballaadhan oo dalladda Ururrada Dhallinyarada Somaliland ee SONYO ku daah-furaysay Buug-Hawleedka Tabaha Ololaha Ee Murashaxiinta Da’da yar oo lagu soo bandhigay Huteel Maansoor. Hoggaamiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee WADDANI Mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan waxa uu la dardaarmay dhallinyarada rag iyo haweenba, waxa uu si adag u dhaliilay xukuumadda waxaanu ku dheeraaday doorka looga baahan yahay qof kasta oo da’yar oo u baahan in uu waddankiisa wax u qabto. Waxaanu yidhi: “Dhallinyarada iyo Haweenka ayaa had iyo goor la xusaa in ay ugu badan yihiin dadka codeeya. Haddana cidda ugu tabashada badan ee tabaysa codkoodii waa iyaga. Ama iyagu isma ay dooran ama qofkii ay doonayeen in uu himiladooda xaqiijiyo may dooran. Gole walba way ku ciil qabaan oo way ka hadlayaan. Ta koowaad Waxaan leeyahay, idinka ayaa eeddeeda leh oo codkiinnii kuma aydaan ciil bixin oo iskumaydaan dooran. Marka labaad, dhallinyaradu intii la doortay ee shaashadda soo gashay, xilligii aan xukuumadda joognay SONYO iyo dhallinyaradii kaleba waxaan kala shaqaynay in xeerka doorashooyinka la dhimo da’da ay dhallinyaradu ku soo galayaan golayaasha qaranka. Laakiinse, dhallinyaradii saaxadda timid, raadkoodii lama hayo. Waxa ay ahayd in ay ka tagaan taariikh iyo waxqabad wanaagsan oo ay kuwa kale higsadaan. Haddii aan haddaba kuwii hore la mahadin waxa iska caddaaanaysa inaan kuwa dambe lasoo dhawaynayn”. Dhallinyarada rag iyo haweenba waxaan leeyahay fikradda ah in dhallinyarada iyo haweenku ay gacan kale ka doonayaan in ay gaadhsiiso halka ay doonayaan taasi sunnaha dunidaba ma aha. cid waliba iyada ayaa gacanteeda isku xoraysa. cid waliba iyada ayaa gacanteeda ku gaadha guusha iyo waxa ay doonayso. Haddaad qaybsan tihiin oo kuwa maanta qabyaalad loo adeegsanayaa idinka tihiin. Haddii ay maanta dhallinyaradu yihiin kuwa marka ay kursiga yimaaddaan ugu nugul. Haddii ay yihiin kuwo siyaasad ahaan aan gaco adag ku taagnayn. Waad arkayseen dhallinyaro badan oo Somaliland aanay macno badan la lahayn oo marka looga yeedho meel kale u dhabaabaceeya oo ku doorsanaya dhadhamo iyo hunguriga. Waar dhallinyarooy, sida aad tihiin haddii aydaan isugu dhaamin, canaan maalin walba joogta oo la yidhaahdo odayaasha ayaa caynkan sameeyey waxba tari mayso. Haddii aad doonaysaan is baddal naftiina ka bilaaba, oo marka dambe codkiina is baddal ku keena”. “Xarumaheenu yaanay noqon kuwo been ah (Fake Institutions) aan ka bilowno oo warqadda codaynta aan wax ku doorano cidda wax qabanaysa ee yaynaan reer iyo qofaf ku dooran. Haddii aynu magacyadii uun dhisno oo xisbiyo jiraan oo dawladi jirto oo hay’ado kale jiraan oo aanu midnaba sidii la doonayay u shaqayn oo aynu canaan iskula wareegnaa waxba tari mayso. Annagu (WADDANI) waxaanu diyaariyay deegaan habboon oo aan is leeyahay xisbiyada waad ugu horraysaan. Golayaashayada xisbiga nooc walba way ku jiraan. Way ka muuqdaan. Maxamed Sadiiq Dhamme ayaa tusaale idiin ah oo maalintii ay ka dhammaatay shantii sano ee la doortay ayuu isa soo taagay oo yidhi way iga dhammaatay shantii sano. Sidaasoo kale waxaanu nahay xisbiga kali ah ee ay haweenku ku jiraan hogaankiisa ugu sarreeya. Waxaan arkayay qolada KULMIYE oo lahayd ama madaxweynuhu ka hadlayo oo uu u qiiraysan haweenka oo wax laga baddalo. Golaha wakiilladana waxaad ogtihiin in KULMIYE ku leeyahay 60%. Ama aan idhaahdo Lixdan. Lixdankii KULMIYE ayaa diiday kootadii haweenka. Annaga intayadu waa labaataneeyoo, kooramba may buuxinayn. Sidaasoo ay tahayna haddana Xildhibaan Cabdulqaadir Jirde ayaa hogaaminayay oo ka shaqaynayay in kootadii haweenka la ansixiyo oo geed iyo goleba kaga hadlay balse waxa ay ka socon wayday KULMIYE. Haddii ay marna Golaha ka soo celiyaan marna haweenka iyo dhallinyarada la ooyaan sax ma aha. Waxaan leeyahay KULMIYE waar haddaad wax qabanaysaan idinka ayaa joogee wax qabta. In lala ooyaa waxba tari mayso. Waa laga yaabaa in ay qaar yidhaahdaan Xirsiyow, waadigii shalayba joogay. Haayoo shalay baan joogay wax la qaban karo oo Legacy ahna waan ka tagoo dhismahaa weyn ee maanta dhallinyaradu ku faanayaan dadkii dhisay baan kow ka ahaa ee la bilaabay. Haayoo, da’da ay maanta sheeganayaan ee ay Golayaasha ku galayaan dadkii kala shaqeeyey ee xeerkii lagu dhimayay da’da ka shaqeeyey ee kala ololeeyey baan ka mid ahaa. Qolada maanta joogta xilka waxaan leeyahay waar ha odhanina waxaasaa la doonayaa ee cidda wax laga doonayo in ay qabataa waa xukuumadda. Waxaasaa loo baahan yahayda waxa iska leh xisbiyada mucaaradkee, ha nagu qabsanina hawshayadee ninkii xilka hayay in uu sidayadii ku celceliyo waxaasaa loo baahan yahay waar gar’ ma aha. Annaga godkayaga ha nagu qabsanina’e, idinka ayaa la idinka rabaa waxqabadka. Ugu dambayn SONYO iyo guud ahaan dhallinyarada waxaan leeyahay haddii aad marka hore dhallinyarada u ololaysaan oo tidhaahdaan talada hala keeno oo aydaan marka dambe ee la doorto ka daba tagin oo kursiga marka ay tagaan aad ka hadhaan markaa taasi waxba tari mayso ee ha inna daalinina”. Ayuu yidhi Let’s block ads! (Why?)
Sarkaal ka tirsan Al-Shabaab iyo darawalkiisa oo xukun adag lagu riday
Muqdisho (Caasimada Online) – Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun adag ku riday Xasan Cabdi Aadan Nuur iyo Cumar Xuseen Abshir oo lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab. Labada eedeysane oo lagu soo qabtay dagaal ka dhacay degmad Dayniile ayaa waxaa loo heystaa inay yihiin sarkaal iyo darawalkiisa, kana howl-gali jiray duleedka degmada Balcad. Hakan hoose ka aqriso faah faahin iyo xukunka:- Maxkamadda ayaa sheegtay in xilliga la qabanayey oo aheyd November Sanadkii tegay ay dhaawac ahaayeen, kadib markii ay weerar ku qaadeen fariisin ciidamada Xoogga dalka ay ku lahaayeen cirifka ay degmada Deyniile kala wadaagto deegaanka Basro. Intaasi kadib hay’adaha caafimaadka dowladda ayaa isku howlay sidii ay u baxnaani lahaayeen, maadaama dhaawacyo ay gaareen, waxaana 11-kii March sanadkan ay ku wareejiyeen xafiiska xeer ilaalinta oo xilligaas codsaday in xabsiga dhexe loo taxaabo Xasan iyo Cumar, si’ay u soo dhameystiraan eedaha labada eedeysane Baaristooda. Xasan Cabdi Aadan Nuur ayaa ahaa madixii maaliyadda Balcad u qaabilsanaa Al-Shaaab laakiin waxa uu ku qiray qiraalkiisa in ay caawinayeen koox iyaga ku tirsan oo uu weerarka ku qabsaday Doonka Cumar oo isaga wada Mooto uga haa Xasan ayaa isna Maxkamadda ka hor sheegay in uu ahaa nin iskiis isaga xamaasho laakiin xafiiska xeer Ilaalinta Ciidamada Qalabka Sida ayaa labada Shaqsi kuwada Eedeeyay in ay qayb ka ahaayeen weerar ay Alshabaab ku qaadeen Fariisin Ciidan November Sanadkii tegay. Muumin Xuseen Cabdullaahi ku xigeenka Xeer Ilaaliyaha Guud ee Ciidamada Qalab Sida ayaa Maxkamadda u sheegay in ay labada Eedeysane wada ahaayeen Gurmad laakiin ciidamada ay u geysteen dhaawac Naafeen ah. Qareennada u dooday labada Eedeysane ayaa iyagana Maxkamadda ka codsaday in loo Naxariisto maadaama labada eedeysane ay u aheyd howlgalkii ugu horreeyay ee dagaal oo ay kawada qayb galeen islamarkaan uu dhaawaca ka soo gaaray labadaba. Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute guddoomiyaha Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida oo soo xiray fadhiga Maxkamadda ayaa Xasan Cabdi Aadan Nuur iyo Cumar Xuseen Abshir Jaabir kuwada xukumay Xabsi daa’in sida uu u sheegay dhinacyada Dacwadda. Eedeysanayaasha ayaa heysta Fursad ay ku dalban karaa Rafcaan muddo ku siman 30 cisho xukunka kadib..
Madaxweynaha Eriteria oo Safar Ujeedo gaar ah laga leeyahay ku tegay Itoobiya
Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Madaxweynaha dalka Eriteriya Isaias Afwerki ayaa saaka booqasho ku tagay dalka Itoobiya halkaas oo uu ku joogi doonto booqasho shaqo oo qaadan doonta muddo Saddex maalmood ah. Markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha Jimma Aba Jifar, waxaa ksoo dhaweeyay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed, iyada oo la geeyay Xarunta Madaxtooyada ee Magaalada Addis Ababa. Wafdiga Madaxweynaha waxaa kamid ah Wasiirka Arimaha Dibada Cusmaan Saalax iyo La Taliyaha Madaxweynaha Yemane Ghebreab, sida uu sheegay Yemene Gebremeskel, Wasiirka Warfaafinta Eritrea. Madaxweynaha dalka Eriteriya Isaias Afwerki & Ra’iisul Wasaaraha itoobiya ayaa waxaa ay ka wada hadli doonaan sii xoojinta xiriirka labada dhinac iyo sidoo kale xoojinta iskaashiga gobolka. Ra’iisul Wasaare Dr Abiy Axmed ayaa wuxuu booqasho tan la mid ah ku tagay Eritrea bishii August ee la soo dhaafay, iyada oo labada dal oo noqdeen kuwo xiriir dhow yeeshay. Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp
Maxkamadda Ciidanka oo xukun adag ku riday labo nin oo dhaawac ah
Maxkamadda darajada 1aad ee Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa Maanta waxaa ay xukun ku riday laba xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab, kuwaas oo lagu qabtay dagaal ka dhacay degmada Deeyniile. Xasan Cabdi Aadan Nuur & Cumar Xuseen Abshir Jaabir ayaa loo haystaa kamid ahaanshiyaha Alshabaab gaar ahaan in ay ahaayeen Sarkaal iyo Darawalkiisa si gaar ah uga shaqeyn jiray deegnada Xiriirsan ee Balcad & Basro. Weerar ay ku qaadeen Fariisin ay Ciidamada Xoogga Dalka ku lahaayeen Cirifka ay degmada Deyniile kala wadaagto Basro ayaa labada Eedeysane lagu soo qabtay iyaga oo dhawaac ah November Sanadkii tegay,sida lagu sheegay War Kasoo baxay Maxkamadda Ciidamada. Hey’adaha Caafimaadka Dowladda ayaa isku howlay sidii ay u baxnaani lahaayeen Maadaama dhaawacyo ay gaareen, waxaana 11-kii March Sanadkan ay ku wareejiyeen Xafiiska Xeer Ilaalinta oo xilligaas codsaday in xabsiga dhexe loo taxaabo Xasan iyo Cumar, si’ay u soo dhameystiraan eedaha labada eedeysane Baaristooda. Xasan Cabdi Aadan Nuur ayaa ahaa madixii Maaliyadda degmada Balcad u qaabilsanaa Alshaaab laakiin waxa uu ku qiray qiraalkiisa in ay caawinayeen koox iyaga ku tirsan oo uu weerarka ku qabsaday Doonka Cumar oo isaga wada Mooto u ahaa Xasan ayaa isna Maxkamadda ka hor sheegay in uu ahaa nin iskiis isaga xamaasho laakiin Xafiiska Xeer Ilaalinta Ciidamada Qalabka Sida ayaa labada Shaqsi kuwada Eedeeyay in ay qayb ka ahaayeen weerar ay Alshabaab ku qaadeen Fariisin Ciidan November Sanadkii tegay. Muumin Xuseen Cabdullaahi ku xigeenka Xeer Ilaaliyaha Guud ee Ciidamada Qalab Sida ayaa Maxkamadda u sheegay in ay labada Eedeysane wada ahaayeen Gurmad laakiin ciidamada ay u geysteen dhaawac Naafeen ah. Qareennada u dooday labada Eedeysane ayaa iyagana Maxkamadda ka codsaday in loo Naxariisto maadaama labada eedeysane ay u aheyd howlgalkii ugu horreeyay ee dagaal oo ay kawada qayb galeen isla markaan uu dhaawaca ka soo gaaray labadaba. Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute guddoomiyaha Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida oo soo xiray fadhiga Maxkamadda ayaa Xasan Cabdi Aadan Nuur iyo Cumar Xuseen Abshir Jaabir kuwada xukumay Xabsi daa’in sida uu u sheegay dhinacyada Dacwadda. Eedeysanayaasha ayaa heysta Fursad ay ku dalban karaa Rafcaan muddo ku siman 30 cisho xukunka kadib..
- Advertisement - Maxkamada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun adag ku riday labo xubnood oo lagu helay in ay katirsanaayeen Al Shabaab ,kuwaa oo dhamaadka sanadkii hore lagu qabtay dagaal ka dhacay Duleedka Dayniile. Xasan Cabdi Aadan Nuur & Cumar Xuseen Abshir Jaabir ayaa maxkamada ciidamada qalabka sida ku heshay in ay katirsanaayeen Al Shabaab, waxa ayna Maxkamada sheegtay in Xasan ahaa sargaal katirsan Al Shabaab halka uu Cumarna darawal u ahaa. Labadan nin ee katirsanaa Al Shabaab ayaa xili habeen ah iyaga oo dhaawac ah laga soo qabtay duleedka degmada Dayniile kadib weerar ay kusoo qaadeen fariisimo ciidanka milatariga Soomaaliya halkaasi ku lahaayeen. Xeer Ilaalinta Maxkamada ayaa sheegay in Xasan Cabdi Aadan Nuur uu ahaa madixii Maaliyadda degmada Balcad u qaabilsanaa Alshaaab, waxa ayna Maxkamada sheegtay in njinkan qirtay in uu caawiyay ragii weerarka ku qaaday Dayniile. Cumar oo isaga wada Mooto u ahaa Xasan ayaa isna Maxkamadda ka hor sheegay in uu ahaa nin iskiis isaga xamaasho laakiin Xafiiska Xeer Ilaalinta ayaa labada Shaqsi kuwada Eedeeyay in ay qayb ka ahaayeen weerar ay Al shabaab ku qaadeen Dayniile. Muumin Xuseen Cabdullaahi ku xigeenka Xeer Ilaaliyaha Guud ee Ciidamada Qalab Sida ayaa Maxkamadda u sheegay in ay labada Eedeysane wada ahaayeen Gurmad laakiin ciidamada ay u geysteen dhaawac Naafeen ah. Qareennada u dooday labada Eedeysane ayaa iyagana Maxkamadda ka codsaday in loo Naxariisto maadaama labada eedeysane ay u aheyd howlgalkii ugu horreeyay ee dagaal oo ay kawada qayb galeen isla markaan uu dhaawaca ka soo gaaray labadaba. Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute guddoomiyaha Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida oo soo xiray fadhiga Maxkamadda ayaa Xasan Cabdi Aadan Nuur iyo Cumar Xuseen Abshir Jaabir kuwada xukumay Xabsi daa’in sida uu u sheegay dhinacyada Dacwadda, waxa uuna cadeeyay in xukunkan racfaan ka qaadan karaan. Xafiiska Shabakada Allbanaadir.comMuqdisho [email protected] - Advertisement -
Togag samaysma xilli roobaadka oo dhibaato ku haya deegaanno hoos yimaada Xudur
Xuddur-(SONNA)- Sanadadii la soo dhaafay Dooxyo ka samaysmay agagaarka wadada aadda dhanka waqooyi ee magaalada Xuddur ayaa si joogto ah daadad ku soo rogmaday saamayn wayn ugu yeesheen dhaq dhaqaaga ganacsiga, tacbashada beeraha, isu socodka gaadiidka iyo dadwaynaha bulshada ku nool xaafada Buulow. Saamaynta xilliga togagga daadadka soo fatahaan waxa aad looga dareeymayaa maciishada cuntada quutul daruuriga oo cirka isku shareerta, beeralayda qudaarta beerata oo daadadka kala tagaan, inka badan saddex kun oo qoys oo daggan xaafada Buulow oo guryahooda kabarakacay iyo cuduro ka dhasha biyaha. Qaar ka mid ah beeralayda ganacsatada barakacayaasha dadka daggan xaafada Buulow iyo bulshada inteeda kale ayaa maamulka gobolka Bakool ugu baaqay in ay wax ka qabtaan dhibaatada ay ku qabaan roobabka daadadka wata ee beerahooda dhibaatada u gaysta. Maamulka gobolka Bakool iyo kan deagmada Xuddur oo ka duulaya codsiga bulshada iyo caqabadaha jira ayaa kormeer ku tagay boholaha biyaha keena oo xiligaan aad looga cabsiqabo in biyo bax sameeyaan, waxayna baaq u direen dowlad goboleedka Koonfur Galbeed dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay’adaha deeq bixiyaasha in ay gacan ka siiyaan sidii biyahaan xal loogu raadin lahaa.
(Yurub) 12 Okt 2020. Weeraryahanka reer France iyo kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappé ayaa muujiyay sida uu u jeclaa inuu wajaho kabtanka xulka qaranka Portugal ee Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé iyo Cristiano Ronaldo ayaa ka qeyb galay kulankii xalay dhex maray xulalka Portugal iyo France ee ka tirsanaa tartanka xiisaha badan ee UEFA Nations League. Haddaba Kylian Mbappé ayaa ciyaarta kaddib ku daabacay boggiisa rasmiga ah ee “Twitter” labo sawir isaga ah oo uu ku wehliyo Cristiano Ronaldo, wuxuuna soo raaciyay qoraal ah: “Mid aan ku daydo”. Weeraryahanka PSG ayaa sidoo kale ku muujiyay bartiisa “Twitterka” in Cristiano Ronaldo uu yahay ciyaaryahanka ugu fiican taariikhda. Waxaa la ogyahay in Kylian Mbappé uu yahay mid kamid ah taageerayaasha ugu caansan ee Cristiano Ronaldo, maadaama yaraantiisii uu ku dhajin jiray sawirka Cristiano Ronaldo derbiga qolkiisa, sidoo kale wuxuu la galay sawir xusuus mudan markii uu yaraa. Waxaa xusid mudan in dhowr wargeys oo Faransiis iyo Isbaanish ah iyo ilo wareedyo ku dhow kooxda Real Madrid ay soo jeediyeen in Kylian Mbappé uu u dhaqaaqi doono Los Blancos xagaaga soo aadan, haddii uusan cusbooneysiinin qandaraaskiisa Paris Saint-Germain. Gool FM.